PressReader - Ilanga: 2018-11-05 - NGOSIBA LWESIKHULU SOSUTHU
NGOSIBA LWESIKHULU SOSUTHU
Ilanga - 2018-11-05 - Ezemidlalo -
AMASONTO amabili edlule abe nzima kakhulu ekilabhini yethu njengoba sihlaselwe wumkhuba wokuvuzisa amagoli amathathu emidlalweni yakamuva. Ngithanda ukukuqinisekisa kubalandeli bethu ukuthi sizosiguqula lesi simo, kanti nethimba labaqeqeshi lisebenza kanzima ukulungisa umonakalo.
Ngithanda ukubonga bonke abalandeli bekilabhu abadele konke bahambela umdlalo wethu wasekhaya, kodwa esiwuthatha njengowasekuhambeni ebesiwugijima ne-Orlando Pirates ngoMgqibelo kusihlwa eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
Kusicacele zisuka nje ukuthi konke obekwenziwa kuqhutshwe ngendlela eyenzelela iPirates ukuze inqobe.
Kasizwakali nhlobo isizathu esibekwe yiPSL sokuthi kakuphephile eMlazi kwazise sisanda kudlala nayo iPirates kuleli lokishi, kakwaze kwaba nazihibe.
Kumqoka ukuthi iKing Zwelithini Stadium ihlonishwe njengenkundla yethu yasekhaya. Ngithanda ukuthi abalandeli bethu bazi uku- thi bekungeyona inhloso yethu ukudlala eMabhida kodwa bekufana nokuthi sikhonjwe ngesibhamu ngoba siphoqiwe.
Kangazi kungani kuchithwa isikhathi kuqhathwa amakilabhu kuze kutonyulwe azodlalela ekhaya nxa kwaziwa ukuthi kukhona okumele abanjwe ngobhongwane ukudlala lapho engathandi khona.
AbakwaTelkom kuyomele baqikelele ukungasetshenziswa ngabantu abathile abaqhuba izenzo zabo zobumnyama. Usuku lwangoMgqibelo lube ngolunye lwezimnyama kakhulu ebholeni laseNingizimu Afrika. Kube buhlungu kakhulu ukuvuka ngezindaba zokudlula emhlabeni kukaRoger Sikhakhane obelolonga iRoyal Eagles. Ubengumuntu onomoya omuhle futhi engomunye wabaqeqeshi abakhaliphe kakhulu, yikhona nje ukuthi imisebenzi yakhe ibingaqhakanjiswa kuleli. Kuningi okuthinta unobhutshu- zwayo ebesikuxoxa naye okuyilapho ngithole khona ukuthi unolwazi olujule kakhulu ngalo mdlalo. Ubeyisibonelo esihle kubaqeqeshi baKwaZulu-Natal, futhi kungaba kuhle ukuthi imisebenzi yakhe iqhakanjiswe. Siyethemba ukuthi uNkulunkulu uzomfukamela ngaphansi kwekhwapha lakhe, aphumule ngokuthula. Ikilabhu yethu inenselelo enzima kakhulu kusukela manje. Ukuphuma kwiTelkom kusinika ithuba lokugxilisa imiqondo yethu emidlalweni yeligi kuphela. Kayiyinhle indawo esihleli kuyona, ngakho-ke kumqoka ukuba sixaxame kusemanje emsileni, futhi kumele kufike uZibandlela (December) sesisendaweni engcono.
Ukuphuma kwiTelkom kakukuhle ngoba sikhuthaza usiko lokunqoba ngaso sonke isikhathi ekilabhini, kodwa-ke ngakolunye uhlangothi siyakubonga ngoba sesizogxi- la kwiligi kuphela. Sizobuyela eKing Zwelithini Stadium siyobhekana nePolokwane City emdlalweni wethu olandelayo, kanti sibheke ukuphendula ngawo amatafula.
Kumqoka ukuba ikilabhu ibe nengqalasizinda yezinga eliphezulu ukuze iqhubeke nokukhula. Sisezingxoxweni nomkhandlu weTheku ukusinika umhlaba othile ukuze sisebenze ingqalasizinda yekilabhu.
Uma ngiya phesheya kwezilwandle kuyaye kungicacele ukuthi nathi siyadinga ukuba nengqalasizinda esezingeni lomhlaba.
Okubuhlungu wukuthi imidlalo ekhonzwe kakhulu ngabebala elimhlophe inengqalasizinda esezingeni eliphezulu.
Silokhu sitshelwa ukuthi le midlalo yahlomula ngesikhathi sobandlululo, kodwa-ke akukho okwenziwayo ukusiza abakunobhutshuzwayo.
Umbhoxo, i-tennis, igalofu yimidlalo enengqalasizinda yomhlaba kuleli, kodwa kunobhutshuzwayo kubanjwa kuyayekwa. Lokhu-ke kumele kushintshwe.
Ngisanda kuhambisa umbiko kumasipala waseZululand njengo- ba kade sisingethe iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Sekucacile ukuthi inothe ngezinto eziningi indawo yaseZululand.
Uma iPrince Mangosuthu Regional Stadium ingalungiswa kahle, ingasingatha imicimbi emikhulu engawufukula mawala umnotho wakuleya ndawo. Okuhle wukuthi abaholi bakhona bahlale bekhombisa ubuholi obuqotho ngaso sonke isikhathi nokubeka umphakathi phambili ezinhlelweni zabo. Siyazi ukuthi lesi yisikhathi esinzima kubafundi bakamatikuletsheni. Sihlale sikukhuthaza nathi lapha ekilabhini ubumqoka bemfundo, kanti yingakho sinabadlali esibayisa ezikoleni ezithile ukuze bashebe imfundo nebhola.
Sihlale sikugcizelela kubaqeqeshi bezinhlaka ezincane ukunika abadlali isikhathi esanele sokubhekana nezincwadi. Sibafisela inhlanhla bonke abafundi bebanga leshumi.